Liverpool oo Xaqiijisay in Virgil Van Dijk uu Ciyaaro ama in uu Dhaawac ku seegayo kulanka Leeds | Warkii.com:-world news today for international news and videos from Europe, Asia, Africa, the Middle East and the Americas.
Home Ciyaaraha Liverpool oo Xaqiijisay in Virgil Van Dijk uu Ciyaaro ama in uu...
Liverpool oo Xaqiijisay in Virgil Van Dijk uu Ciyaaro ama in uu Dhaawac ku seegayo kulanka Leeds
Tababaraha kooxda Liverpool ee Jurgen Klopp ayaa ka hadlay haddiiba daafaca dhexe ee kooxdiisa ee Virgil Van Dijk uu taam buuxa u yahay kulanka ay Leeds United booqanayaan toddobaadkan.
Jamaahiirta Liverpool ayaa wadnaha farta ku hayay kaddib markii uu Virgil dhaawac gaadhay ciyaartii xulka Netherlands ay 6-1 uga adkaadeen dhigooda Turkey, VVD ayaa baxay isaga oo canqawga ka dhaawacan oo dhutinaya.
Daafaca dhexe ee Reds ayaa wax ku noqday kaddib markii ay isku dhaceen goolhayaha Turkey-ga ee Justin Bijlow daqiiqadihii ugu dambeeyay ee ciyaarta.
Van Dijk ayaa dhawaan uun kusoo laabtay garoomada kaddib markii uu mudo dheer ku maqnaa dhaawac jilibka ah oo uu ku seegay xilli ciyaareedkii hore badi.
30 sano jirkaas ayaa ciyaarta kaddib saxaafada u sheegay inuu wanaag dareemayo oo uusan waxba qabin, haatana Klopp ayaa usii xaqiijiyay taageerayaasha kooxdiisa inuu ciyaar u yahay ciyaarta Leeds ay booqanayaan Axada.
“Virgil arrintiisa, taasi waxay ahayd daqiiqad cabsi leh, waad qiyaasi karaysaa” ayuu tababaraha German-ka ahi u sheegay Website-ka rasmiga ah ee Liverpool.
“Waxaan u diray farriin kulanka kaddib, ‘Ma fiicantahay? Haa, Ma fiicantahay 100%?’ ‘200%’ isoo dir sawir adiga oo aan dhutinayn…..’ Kaliya waan dhutinayaa”
Previous articleMid kamid ah Kooxaha ugu weyn Premier League oo dooneysa Luka Modric .
Next articleDeg Deg Yey yihiin labada ciidan ee uu Farmaajo isku haleynayo 10/09/2021